कसरी इन्स्टाग्राममा दर्ता गर्ने: सबै तरिकाहरू | ग्याजेट समाचार
Instagram अहिलेको सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क भएको छ। यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि राम्रो विकल्प हो, साथै कम्पनीहरू र ब्रान्डको शोकेसको रूपमा कार्य गर्दछ। यस कारणले गर्दा, यो सामाजिक नेटवर्कमा खाता हुनु यो सामान्य छ। यद्यपि त्यहाँ केही प्रयोगकर्ताहरू हुन सक्दछन् जुन अनुप्रयोगमा कसरी खाता खोल्न सम्भव छ थाहा छैन।
यो एक साधारण प्रक्रिया हो, जुन हामी तपाईंलाई तल यसो भन्छौं। त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन हामी इन्स्टाग्राममा खाता खोल्न सक्छौं, त्यसोभए यो सम्भव छ कि तपाईं मध्ये कोहीसँग त्यस्तो विधि छ जुन तपाईंलाई बढी आरामदायक छ। त्यसकारण हामीले यस सम्बन्धमा उपलब्ध दुई विधिहरू जान्नु राम्रो हुन्छ।
1 नयाँ खाता खोल्नुहोस्
2 तपाईंको फेसबुक खाता प्रयोग गर्नुहोस्
3 कुन विकल्प उत्तम हो?
हामीसँग उपलब्ध भएको पहिलो तरिका स्क्र्याचबाट एउटा खाता सिर्जना गर्नु हो। यसको लागि हामीले गर्न आवश्यक छ वेबसाइट वा अनुप्रयोगमा डाटाको श्रृंखला प्रविष्ट गर्नुहोस्, यो दुबै विधिहरू प्रयोग गरेर खाता सिर्जना गर्न सम्भव छ। यो गर्नका लागि हामीले सामाजिक नेटवर्कको वेबसाइटमा जानुपर्नेछ, यो लिंक। डाटा जुन इन्स्टाग्रामले हामीलाई कुनै पनि हालतमा सोध्छन् निम्न हुन्:
एउटा ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बर (सबैजनाले आफूले चाहेको विकल्प छनौट गर्छन्)
व्यक्तिको पूरा नाम
प्रयोगकर्तानाम (तपाईले जाँच गर्नुपर्दछ कि चाहिएको एक नि: शुल्क छ)
यस तरिकाले, हामीसँग गर्नुपर्दछ खाता सिर्जना गर्न यो जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस् यस तरिकाले अनुप्रयोगमा। जब डाटा प्रविष्ट गरिएको छ, तपाईंले निलो अर्को बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, यदि यो वेबबाट गरियो भने। सामान्य कुरा यो हो कि यदि त्यहाँ कुनै डाटा छ जुन गलत छ, जस्तै प्रयोगकर्ता नाम पहिल्यै कब्जामा छ वा एक ईमेल दिइएको छ जुन पहिल्यै सम्बन्धित खाता भएको छ भने, यो पर्दामा सूचित गरिनेछ।
एक पटक यी सबै डेटा अनुप्रयोगमा प्रविष्ट गरिसकेपछि, खाता सिर्जना हुन्छ। इन्स्टाग्राम खुल्नेछ जहाँ तपाईं आफ्नो प्रोफाइल छ र जहाँ एकै समयमा सबैको कन्फिगरेसन अनुमति हुनेछ। यी सरल चरणहरूको साथ खाता पहिले नै सामाजिक नेटवर्कमा सिर्जना गरिएको छ। एक पटक तपाईंको खाता छ, अर्को चरण उस्तै प्रमाणिकरण हुन सक्छ, विशेष गरी व्यवसाय वा कलाकार प्रोफाइलहरूमा।
तपाईंको फेसबुक खाता प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं धेरैलाई पहिले नै थाहा छ, इन्स्टाग्राम केहि वर्षको लागि फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको छ। त्यसकारण, त्यहाँ केहि बुँदाहरू छन् जहाँ दुई सामाजिक नेटवर्कहरू एकीकृत गरिएको छ, वा ती दुवैका बीच एकीकरणलाई सजिलो बनाएको छ। यस कारणले गर्दा, प्रयोगकर्ताहरूलाई अर्को सामाजिक नेटवर्कमा प्रोफाइल सिर्जना गर्न प्रयोगको लागि खाताको रूपमा उनीहरूको फेसबुक खाता प्रयोग गर्ने क्षमता प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैले दुबै प्रोफाइलहरू यसैले सम्बन्धित छन्। यो खाता सिर्जना गर्न वास्तवमै सरल तरीका हो, किनकि तपाईं तिनीहरूलाई मात्र सम्बद्ध गर्नुपर्दछ।
यो वास्तवमै केहि सरल छ, यसले केहि सेकेन्ड लिन्छ। हामीले सामाजिक नेटवर्कको वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, यो लिंक। यसमा हामी विकल्प फेला पार्दछौं कि «फेसबुकको साथ लगईन गर्नुहोस्।, निलो बटनमा प्रदर्शित। जब तपाईं यो बटन थिच्नुहुन्छ, के हुन्छ हाम्रो फेसबुक खाताको सत्र सुरू गर्न, तर यस पटक इन्स्टाग्राममा। हाम्रो प्रोफाइल नाम यसमा पूर्ण सुरक्षाको साथ आउनेछ।
यो एक त्यस्तो विधि हो जसले धेरै सान्त्वना प्रदान गर्दछ, विशेष गरी यदि तपाइँ प्रयोगकर्तानाम खोज्न चाहनुहुन्न भने। एक व्यवसाय वा पेशेवर प्रोफाइल को मामला मा, यो एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ दुई सम्बन्धित प्रोफाइल छ। प्रबन्धन गर्न सजिलो हुनुको साथै, एक सरल लॉगिन भने जहिले पनि अनुमति दिईन्छ वा नाम उही हो, जसले तपाईंलाई प्रोफाइलमा निश्चित छवि दिन चाहनुहुन्छ भने मद्दत गर्न सक्दछ।
स्मार्टफोनमा अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने मामलामा, जब तपाईं फोनमा अनुप्रयोगहरू खोल्नुहुन्छ, धेरै विकल्प देखा पर्दछ। स्क्रिनमा प्रदर्शित विकल्प मध्ये एक फेसबुकको साथ लग ईन गर्नु हो। त्यसोभए यदि तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको फोनमा फेसबुक अनुप्रयोग स्थापना भएको छ र सत्र खुला छ भने, यो सिnch्ख्रोनाइज हुनेछ त्यसैले केही सेकेन्डमा तपाईं इन्स्टाग्राममा लगइन हुनुहुनेछ। स्मार्टफोन अनुप्रयोगमा पनि प्रयोग गर्न सजिलो छ।
कुन विकल्प उत्तम हो?
त्यहाँ वास्तवमा एउटा विकल्प छैन जुन अर्को भन्दा उत्तम छ।। दुबै तरिकाहरूले हामीलाई इन्स्टाग्राममा खाता राख्न अनुमति दिन्छ जुन हामी चाहान्छौं। धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसलाई उनीहरूको फेसबुक खातासँग सि sy्क गर्ने क्षमताले यस प्रक्रियालाई धेरै सजिलो बनाउँदछ। कुनै श doubt्का बिना, यो एक सहज र धेरै उपयोगी विकल्प हो, त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्न न हिचकिचाउनुहोस्, किनभने यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ।
अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग फेसबुक खाता छैन भने, तपाईंले स्क्र्याचबाट आफ्नै इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ। तर यो एक जटिल प्रक्रिया होईन, त्यसैले सामाजिक प्रोफाइलमा तपाईंको प्रोफाइल लिन यसले लामो समय लिन सक्दैन। यस तरिकाबाट, तपाईं यसलाई सकेसम्म चाँडो यसको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » इन्स्टाग्राममा कसरी दर्ता गर्ने